Semalt ले पेशेवरहरू र एसईओ आफैलाई गर्ने र एजेन्सी एजेन्सी गर्ने कामको परिभाषा गर्दछ
यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को लागी खोज ईन्जिनहरु मा केहि अनलाइन उपस्थिति चाहानुहुन्छ, तपाईलाई उत्कृष्ट SEO सेवाहरु को लागी वांछित परिणामहरु पुग्न को लागी आवश्यक पर्दछ। पेशेवर एसईओ सेवाहरू एक एसईओ फर्म द्वारा प्रदान गर्न सकिन्छ, वा तपाईं आफैं कार्यहरू गर्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको वेबसाइट संवेदनशील सामग्री वा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी को लागी यस्तो वजन को रूप मा सौदा, स्वास्थ्य वा वित्तीय सेवाहरु को लागी, एसईओ आफै गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ। यो अवस्थाले तपाईंलाई निम्न विकल्पहरूको साथ छोडिदिन सक्छ:
SEO आफैँ सिक्दै
घर मा विशेषज्ञ भर्ती
तपाईंको SEO आउटसोर्सिंग
भाँडामा लिने र आउटसोर्सिंगले अनुभवी विशेषज्ञहरूलाई खोज्ने अनुमान गर्छ जसले जैविक खोजीमा वेबसाइटलाई दर्जा दिन्छ। खोज इञ्जिनहरूका लागि अनुकूलन एक लामो प्रक्रिया हो र प्रायः यो ढिलो र अनिश्चित हुन्छ। निश्चित रकम र समयको लगानीको खोजी खोजीको लागि धेरै अर्थ हुन सक्छ। जब तपाईं एसईओ आफै गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, आवश्यक स्रोतहरू, आवश्यकताहरू र एसईओ लाई प्रभाव पार्ने विशिष्ट कारकहरू विचार गर्नु राम्रो हुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईले त्यसलाई पेस गर्न सक्नुहुन्छ पेशेवर र छिटोको लागि। अन्तिम विकल्पले सम्मानित एसईओ कम्पनी फेला पार्दै छ जुन वेबसाइटहरूको रैंकिंगमा अनुभव छ।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक निक Chaykovskiy, तपाईं कुशल एसईओ चलाउन को लागी कसरी निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने दिशा निर्देशन दिन्छ।
१. अग्रिम लागत
वित्तीय कारकहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विचारहरू हुन्। तपाइँको वेबसाइट को लागी एसईओ सीखने एक आदर्श विचार हुन सक्छ। यद्यपि तपाईलाई चाँडै नै थाहा हुन्छ कि तपाईलाई धेरै उचाइमा पुग्न धेरै अनुभवी टीमको आवश्यक्ता पर्न सक्छ। धेरै जसो इन्टरनेट मार्केटरहरूले 500usd सम्म को मूल्य लाग्न सक्छ। जे होस्, यदि तपाईं ठूलो कम्पनीको लागि SEO गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी तथ्या .्कहरू 10000usd सम्म बढ्न सक्छ।
२. विशेषज्ञता / दक्षता कारक
एसईओ फर्महरुसँग विशेषज्ञहरु छन् जोसँग इन्टरनेट मार्केटिंगको धेरै क्षेत्रहरुमा धेरै अनुभव छ। यो तपाइँको वेबसाइटको लागि तपाइँ के चाहानुहुन्छ भनेर आफैलाई सोध्नु आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, एक एजेन्सी कुञ्जी खोजमा भन्दा backlink मा अधिक अनुभवी हुन सक्छ। साथै, सामान्य एसईओ को अर्थ सबै ट्रेडहरूको ज्याक हुन सक्छ, जुन संवेदनशील सामग्रीको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ।
Long. दीर्घकालिक कर्षण विफलताको जोखिम
एक कम्पनी संग काम गर्दा, एक चीज मापन र एसईओ प्रयास को प्रगति को अनुमान गर्न सक्दछ। यदि तपाइँको एजेन्सी एक विस्तार अवधि को लागी ध्यान देने योग्य परिणाम उत्पादन गर्दैन भने, यो एक लागत कुशल विकल्प संग बदल्न महत्वपूर्ण छ। सम्झनुहोस् SEO एक पटक चीज छैन र परिणाम लिनको लागि एक बर्ष भन्दा बढी लाग्न सक्छ।
The. सबै भन्दा राम्रो विकल्प
एकचोटि तपाईंले निर्णय लिइसक्नुभयो कि तपाईंको एसईओ का लागि के गर्ने, यो लागत-देखि-लाभ दृष्टिकोणबाट छनौट गर्न आवश्यक छ। धेरै जसो अवस्थाहरूमा, एजेन्सीको छनौट सबैभन्दा अनुकूल विकल्प हुनेछ। राम्रो एसईओ कम्पनीले तपाईंलाई लगानी गरेको पैसा फिर्ता लिन मद्दत गर्नुपर्दछ यदि नाफा होईन भने।
कहिलेकाँही, यो जान्न गाह्रो छ कि तपाईं आफै एसईओ गर्न चाहानुहुन्छ वा टोली भाँडामा लिनुहोस्। तपाईले चाहानु भएको लक्ष्य र कार्य क्षमतामा निर्भर गर्दै, उत्तम विकल्प फेला पार्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै मापदण्ड छन् जसलाई कसैले पनी यी परिस्थितिहरू समाधान गर्न अनुसरण गर्न सक्छ। जे होस्, एसईओ सहायता को लागी न्यूनतम बजेट प्रति महिना १०० मा खाताहरु र स्पष्टतः पेशेवर मद्दतले तपाई आफैले आफै भन्दा धेरै फाइदा लिनेछ। कसैको गल्ति र उपलब्धिहरूको अनुभवमा कोरेर, तपाईं आफ्नो फर्महरूको दीर्घकालीन विकासको लागि राम्रो रणनीति बनाउन सक्नुहुन्छ र गल्तीहरू हटाउन सक्नुहुन्छ जुन क्रमबद्ध गिरावट निम्त्याउन सक्छ।